ओमिक्रोन नामक नयाँ कोरोना भेरिएन्ट कति खतरनाक छ, के छन् यसका लक्षण, के खोपले काम गर्ला? - Everest Dainik - News from Nepal
ओमिक्रोन नामक नयाँ कोरोना भेरिएन्ट कति खतरनाक छ, के छन् यसका लक्षण, के खोपले काम गर्ला?
एभरेष्ट डेस्क । केही हप्ताअघिसम्म दक्षिण अफ्रिका कोरोनाबाट भइरहेको मृत्युको श्रृंखला रोक्न सफल थियो । डेल्टा भेरिएन्टलाई समेत उनीहरुले परास्त गरेका थिए ।
तर एकाएक प्रेटोरिया विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थीहरु अकस्मात बिरामी परे । स्वास्थ्यकर्मीहरुले यो कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट हो भन्ने ठानेँ । तर यो डेल्टा थिएन ।
समान प्रकृतिका लक्षण भएका बिरामी बोत्सवानामा पनि देखा परे । यसपछि हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा समेत कोरोनाको यो नयाँ रुप देखियो ।
गत हप्ता दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरुले पुरानो भाइरस तीब्र गतिमा म्यूटेसन हुँदै गएर नयाँ म्युटेसन भाइरस बनेको कुरा घोषणा गरे । यसअघिका म्युटेसनहरुले थोरैपटक हुन्थे । जस्तो डेल्टा भेरियन्टले २० पटकसम्म आफ्नो रुप फेरेको पत्ता लागेको थियो । तर अहिले देखिएको यो भाइरस पचासपटक बढी म्यूटेसन गर्न सक्छ । अर्थात् नयाँ स्वरुपमा देखा परिरहेको छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशहरुलाई यो भाइरसको खतराबारे सूचित गर्दै जोखिम हुन नदिन आवश्यक सबै सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ ।
ओमिक्रोन नाम दिइएको यो नयाँ प्रजाति गत २४ नोभेम्बरमा मात्रै विश्वस्वास्थ्य संगठनको जानकारीमा आएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, अहिलेसम्म एक दर्जन बढी देशमा यो प्रजातिको भाइरस देखा परेको छ । डब्लुएचओले यसलाई निकै उच्च खतरा निम्त्याउन सक्ने बताएो छ ।
याे पनि पढ्नुस साउदी अरबमा पनि देखियो कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट
तर वैज्ञानिकहरुसँग यो नयाँ भेरिएन्टको बारेमा पर्याप्त सूचना भने छैन । तर अहिलेसम्म जे जति पत्ता लागेको छ, त्यसका आधारमा यो भाइरस द्रूत गतिमा संसारमा फैलिने खतरा भने उनीहरुले औंल्याएका छन् । डब्लुएचओले यो नयाँ भेरिएन्टले पुनः संक्रमण हुने जोखिम समेत बढाएको बताएको छ ।
यो नयाँ प्रजातिले शरीरमा रहेका एन्टीबडीविरुद्ध कडा प्रतिरोध गर्ने भएकोले यसअघिका खोपहरु पूर्ण प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरा समेत वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । त्यसैले यो नयाँ प्रजातिको अध्ययनसँगै विश्वमा रहेका कोरोनाविरुद्धका खोपहरुमाथि पनि पुनः समीक्षा गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार हाल उपलब्ध खोपले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि खोपले सुरक्षा प्रदान गर्दै गर्दैन।
कोभिडका डेल्टा, अल्फा, बीटा अनि गामा जस्ता प्रमुख भेरिअन्टहरूले गराउन सक्ने गम्भीर बिरामी हुनबाट जोगाउन खोपहरू अझै प्रभावकारी छन्।
यो भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरुमा सामान्य लक्षण देखिएको बताइन्छ । अधिकांशले ज्वरो, जीउ दुख्ने र अत्यधिक थकाइ लागेको बताएका थिए ।
नयाँ भेरिएन्टको जोखिमसँगै बिभिन्न देशहरुले सुरक्षा उपाय समेत अपनाउन सुरु गरेका छन् । संसारका मूख्य एयरपोर्टमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।
कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरिअन्ट ओमिक्रोन फैलिन सक्ने भन्दै नेपालले पनि दक्षिण अफ्रिकाबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर नेपाली राहदानीवाहक तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूमाथि त्यस्तो प्रतिबन्ध लागु नहुने अध्यागमन अधिकारीहरूले बताए।
उनीहरूका अनुसार नेपाली राहदानी भएका र कूटनीतिक राहदानी बोक्ने अन्य देशका नागरिकले पनि नेपाल आएपछि १४ दिन अनिवार्य क्वारन्टीनमा बस्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा उक्त भेरिअन्टको भाइरस देखा परेको पुष्टि भएको छैन।
तर भाइरसको त्यो नयाँ प्रकारलाई दृष्टिगत गर्दै “आवश्यक सतर्कता अपनाइएको र प्राविधिक विश्लेषण पनि थालिएको” स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार उक्त भाइरसको नयाँ भेरिअन्ट दक्षिण अफ्रिकाबाट उत्पन्न भएको भन्ने कुराहरू आएकाले उक्त देशबाट आउने व्यक्तिलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिइएको हो।